Dalka Ceylon oo aad Moodo in uu Soo Af Jaray Colaaddo 30 jirsaday – Rasaasa News
Qayb 2aad oo ku saabsan halgankii 30ka sano ka socday dalka Ceylon ee ay waday Jabhada Tamiilka oo hada u eg in uu soo af jarmayo iyo taariikh kooban oo ku saabsan dalkaas.
Dalka Sirilanka waxa uu ka xorrobay Ingiriiska 1948. Sida aad xustay dadka wadanka ku dhaqan waxaa ugu badan Sanhaliska iyo Tamiilka oo diini ahaan kala duwan. Tamilku waxa ay aaminsan yihiin in la gacan bidixeeyo sidadarteed waxa ay asaaseen jabhada u dirirta xuquuqdooda oo bilaabatay tobatameeyadi. Waxa ay dagaalka ku jireen 26 sano. Inta ay dagaalka ku jireen waxa ay gacanta ku dhigeen 1/3 dhulka Sirilanka iyaga oo ku guulaystay in ay noqdaan ciidan caadi ah oo ka gudbay dagaalkii ah ” hit & run” Waxaa xusid mudan in ay dilal ismidaamin ah ku dileen madaxwayne Sirilanka ah iyo Rajif Ghandhi oo ah madxa sare oo dalka India – prime minister?
Intii ka dambaysay 11 September waxaa jabhada lagu soo rogay cunaqabateen iyada oo lagu daray liiska argagaxisida taaso raad xoog leh ku yeelatay himiladoodi iyo rajadii ay ka qabeen in ree galbeedku tageero.
Ree galbeedku kuma qancin dawlada Sirilanka sidaa darteed ma helin taageeradii ay rabtay. Waxaa ay taasi keentay in dawlada Sirilaanka ay jaleecdo dhanka Shiinaha ka soo dhawrkii sano ee ugu dambeeyey hub casri ah ugu deeqay dawlada. Waxa hubka ka mid ah diyaaradaha dagaalka oo dagaalkii ugu dambeeyey ee lagu jabiyey jabhada qayb libaax ka qaatay. Waxaa xata aan maanat akhriyey warbixi ku qornayd jariirada the Times oo sheegaysa in Israel ay caawisay dawlada Srilanka !
In UN-tu dhaleecayso xadgudubyada dawlada waxaa hortaagna China iyo Russia. Inkasta oo dadka tamilka lagu tilmaamo dad naxariis daran haddana waxaa ka sii xun sida ay dawladu u ciqaabtay taaso saamasay dadka Tamilka oo idil Maxaa laga baran kara?
Dunida waxaa ka jirta cadaalad darro sidadarteed si kasta oo aad u dagaalantid hadii aadan haysan tageerada mid ka mid ah “super powers” way adag tahay in aad xaqaaga heshid. Soomaalidu waxa ay tidhaahda: AMA BUUR AHOW AMAA BUUR KU TIIRSANO – ama xoog lahaw ama cid xoog leh ha ku taageerto.
Dadka xaq u dirirka ah waa laga awood ronaan kara ciidan ahaan lakiin hadii aan la helin xal siyaasi ah milatiriga kaligii ma noqon karo xal.
Ugu dambayn, marka dagaalka iyo colaadu dheeraato waxaa suurtagal ah in dad badan oo dunida hareeraheeda ku sugan ay iswaydiiyaan maxaa meesha ka jira madaama hadalhayndiidu badato oo war kasta lagu sheegayo – waxaa halka ka dhalan kara dad badan oo qaarkood muhiim yihiin in ay dib u bartaan asaaska mashaakilka islamarkaana sidii xal loo gaadhi laha la rogrogo.
Xubin Muhiim ah oo ka Tirsan Jwxo-shiilada oo Xanuun la Ildaran